Xogta beddelashada ka mid qalab kale u caddayn karo in la adag iyo waayo-aragnimo wakhti dheer qaata. Bal aan eegno laba siyaabood oo fudud oo kaa caawin kara in aad xogta ka phone Windows wareejiyo qalabka Android lacag la'aan ah.
1. content Transfer isticmaalaya computer.
2. content Transfer isticmaalaya OneDrive.
3. Transfer xiriir la isticmaalayo Muuqaalka iyo Gmail.
4. Transfer Content la Mobiletrans Wondershare gebi hassle- lacag la'aan ah.
Xulashada mid ka mid ah, iyadoo la isticmaalayo computer to content ka mid qalab wareejiyo kale
Marka ay timaado in wareejinta xiriirada, waraaqaha, audio video files iyo macluumaad kale oo ka phone Windows qalabka Android, xira labada qalabka si aad PC xogta wareejinta waa ikhtiyaarka ugu doorbiday.
Dhammaan wixii aad u baahan tahay inaad samayso waa isku xiro labada qalabka si aad u computer ama laptop iyadoo la kaashanayo fiilooyinka xogta. Fur folder kasta mid mid, oo si fudud aad nuqulka-paste content ka fayl phone daaqadaha si fayl qalab android.
Waxa Ayidaya iyo Diidaya sidan
Tani waa habka ugu fudud to content ka mid qalab wareejiyo kale ah. Ma jirto baahi ah ee internet-ka. Faylal ay wareejiyo oo kaliya dhowr ilbiriqsi gudahood.
Qaybta xun laga yaabaa inay tahay xaqiiqda ah in files iyo fayl wareejiyo in ay qaab jira. Sidaas, qaar ka mid ah videos, sawirada, iyo files in aad furto in aad telefoon Windows Ma laga yaabaa in la jaan qaada qalabka Android oo laga yaabaa in aan xitaa u furan ka dib markii wareejinta. Same waa dhibaatada la wareejinta xiriir telefoonka, sida kasta xiriir dukaamada dukaamada qaab ka duwan. Habkani ma loo isticmaali karaa si ay u gudbiyaan farriimo qoraal ah oo ka mid ah qalab si kale.
Xulashada laba: isticmaalaya Microsoft ee app OneDrive
Nidaamka qalliinka phone smart Microsoft ayaa laga yaabaa in aanay sida uu shacbiyad u Android ama macruufka. Laakiin, qaar ka mid ah barnaamijyadooda Microsoft ee waa cajiib hubaal! Microsoft ee app OneDrive waa mid ka mid ah kuwa Chine in dhab ahaan waxay noqon karaan qaar waxtar u leh macluumaadka ka mid qalab wareejinta kale. App wuxuu taageeraa qalabka Windows, macruufka iyo Android.
Tallaabada koowaad waa in ay soo bixi app OneDrive in labada qalabka. Ka dib markii ay soo degsado, app aad ku dhaliyay in ay lasoo saxiixato in adiga oo isticmaaleya isticmaale account Microsoft.
Marka aad saxiixdo-in la isticmaalayo username iyo password aragti aad, app furi doonaa bogga guriga iyo muujiyaan content aad hadda jira ayaa ah in aad ku kaydsan OneDrive.
Hadda, furo app la mid ah in aad telefoon daaqadaha iyo guji Upload icon.
Guji "files Upload" doorasho haddii aad rabto inaad geliyaan waraaqaha, files audio, iyo qaabab kale oo ay taageerayaan. Haddii aad rabtid in aad geliyaan videos iyo sawiro ka qalab aad, kaliya dooranayaan quduuska.
App wuxuu muujin doonaa oo dhan fayl iyo-fayl sub ka phone Windows. Fur galka mid mid iyo dooran content in aad rabtid in aad wareejiso in aad telefoon cusub.
Marka aad dooro files walaacsan, guji oo kaliya "geliyaan". App wuxuu bilaabi doonaa uploading oo dhan content ee la doortay ee server OneDrive.
Ka dib markii uploading oo dhan content lagama maarmaanka ah ka phone Windows on OneDrive, furo app OneDrive qalabka Android aad.
Dooro content in aad rabtid in aad u hagaagsan oo telefoonka aad Android oo si fudud isku soo bixi.
Doorashadan waxa ku haboon yahay dadka u safraya dalalka kala duwan oo caalamka ah iyo telefoonka gacanta bedesho dhawr jeer ay. Sida oo dhan ka kooban oo muhiim ah ayaa weli ku kaydsan OneDrive, users soo saaro karo waqti kasta iyo meel kasta. Dhammaan wixii ay u baahan yihiin waa dukaamada Android, Windows, ama macruufka lagu taageeraa app OneDrive.
Sidii hore loo soo xusay, doorashooyinkan waa ugu fiican ee ku haboon dadka doonaya in ay u gudbiyaan xiriirada, waraaqaha, iyo files aan la isticmaalayo PC. Dhowr qof isticmaalaan habkan inay ka mid phone wareejiyo ay raalli halka mid kale uu ku go ka. Images, waraaqaha iyo videos waxaa laga daawan karaa iyadoo la kaashanayo app OneDrive, oo lagala soo bixi karaa qaab socon.
Hadda khasaare ah! Waxaad u baahan tahay xidhiidh firfircoon internet in aad qalab Windows iyo Android, ugu doorbidayo, Wi-Fi. Xogta beddelashada laga yaabaa inay qaadato waqti badan, sida faylasha marka hore la wareejiyo OneDrive, ka dibna, ka OneDrive in qalab Android aad.
Nasiib darro, app tani ma caawin kartaa in wareejinta xiriirada ama fariimaha qoraalka ah ka mid phone in kale.
Xulashada 3: xiriirada Transfer isticmaalaya Muuqaalka iyo OneDrive
In-si loo soo wareejiyo xiriirada ka phone Windows in qalab Android, u hagaagsan xiriirada aad ka phone Windows la Outlook. Markaas, saxiixo-in si account Muuqaalka aad ka PC desktop ama kiniin ah, oo guji "Dadka" doorasho dhibic ka hoos menu.
In shaashadda soo socda, guji "Maamul" oo xulo "Dhoofinta u Muuqaalka iyo adeegyada kale" dhibic hoos menu.
Marka aad gujisid in, Muuqaalka si toos ah u soo bixi doona xiriirada on qalab aad foomka of file .CSV.
Hadda, furo Gmail, oo guji Gmail ee xiriir doorasho.
Shaashadda xigta ee aad ku tusi doonaa fursado dhowr ah, oo aad u baahan tahay in ay doortaan "-dejinta."
Marka uu furmo suuqa pop-up ka muuqataa, guji dooranayaan file, dooro file xiriirrada Muuqaalka CSV in aad soo bixi Outlook. Markaas, si fudud guji dejinta.
Dhowr ilbiriqsi gudahood, Gmail u hagaagsan doonaa dhammaan xiriirada ka Outlook ee file oo iyaga isku darsamaan aad xiriirada jira on Google. Bilow qalab Android aad, iyo si fudud u hagaagsan xiriirada Google ee xiriirka la telefoonka ee. Taasi waa! Tani dabcan waa habka ugu wanaagsan ee ay u gudbiyaan xiriirada ka phone Windows in qalab Android, iyo in sidoo kale, lacag la'aan ah oo ah qiimaha.
Xulashada 4: Content Transfer la Mobiletrans Wondershare gebi hassle- free
Mobiletrans Wondershare si toos ah uga Winphone in Android wareejin kartaa sawiro, videos iyo files music. Waxa kale oo ay soo celin karaa xiriirada aad ka gurmad Onedrive ee Winphone in qalab android aad. Tallaabooyinka soo socda ay muujiyaan sida tan lagu gaari karaa.
Talaabada 1: fur Wondershare Mobiletrans iyo guji "Phone inay kala iibsiga Phone" ka.
Talaabada 2: Isticmaal fiilooyinka USB in ay ku xidhmaan labada qalab android iyo qalab daaqadaha si aad u computer. On isku xira labada qalabka, riix "Flip" button barnaamijka si ay u beddelaan telefoonada caga iyo ilo.
Talaabada 3: : Halkaa marka ay marayso, waxaad u baahan doontaa in ay doortaan faylasha doonayo si ay u gudbiyaan iyadoo la xaqiijinayo sanduuqa ag noocyada file la hubiyaa. Waxa kale oo aad dooran reynaya xogta ku phone caga haddii la doonayo. Tani waxay xaqiijin doontaa dhammaan xogta ka qalab android aad qadan hor inta aanad bilaabin kala iibsiga haddii aad dooratid xulashada ah "data Clear hor nuqul".
Fiiro Gaar ah: Kala beddelashada xiriirada ka phone daaqadaha qalab android aad u baahan doontaa in gurmad xiriir in aad marka hore Onedrive halka Mobiletrans kaa caawinaysaa in aad u soo celiso qalabka android aad.
Talaabada 4: : Guji "Transfer bilow" si ay u bilaabaan wareejinta. Hubi in labada telefoonada joogo xiran inta lagu jiro hanaanka wareejinta.
> Resource > Transfer > Afar siyaabo xogta ka phone Windows wareejiyo qalabka Android for free